#Socialnomics 2014 by Erik Qualman bụ usoro nke ise nke usoro vidiyo kacha lelee na Social Media. Vidio nke afọ a na-egosi oke oke dị n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya, mkpanaka yana mgbawa nke ojiji nke puku afọ.
Anyị enweghị nhọrọ na ma ànyị na-arụ ọrụ mmekọrịta. Nhọrọ bụ otu anyị si eme ya nke ọma. Erik Qualman
Tags: eric qualmanmmekọrịta ọha